Kiraro mateza - lamaody, vehivavy, tora-bao, sehatra, kodiarana, dobo, rantsantanana, silikô, fanatanjahan-tena, hoditra
Kiraro matevina - 105 sary avy amin'ny modely isan'andro sy miala sasatra amin'ny marika tsara indrindra
Kiraro mofomamy - ity no modely izay mijanona ivelan'ny lamaody amin'ny lamaody. Ilaina ny vanin-taona lohataona sy fahavaratra. Ankoatra izany, dia ny akanjo mahazatra sy maingoka, izay ho ampifandraisina tanteraka amin'ny tora-pasika sy ny sarin'ny andavanandro. Ny tombony hafa amin'izany hatsarana izany dia ny manasongadina ny fahasoavan'ny ankizivavy.
Fashion shale 2018 - izany no afaka hifaninana amin'ny kiraro amin'ny fianarana , sambo tsara tarehy. Ny tontolo amin'ny lamaody avo dia tsy mihetsika. Isaky ny vanim-potoana ara-potoana dia misy karazan-tsarimihetsika marobe mameno ny endriky ny modely mahafinaritra sy ny kiraro fotsifotsy - porofo manamarina izany. Fihetseham-po amin'ny antsipirihany momba ny fanangonana lamaody, te-hiresaka momba ny famoronana ny Fenty x Puma aho, fanangonana noforonin'i Rihanna. Ny toetra mampiavaka ny modely tsirairay dia ny fahanginana. Mazava tsara ny antony nividianan'ireo mpankafy an-tapitrisany dolara an-tserasera ny zavatra nosoratany.
Ary akanjo shoe avy amin'ny marika London any ISA ARFEN - foana foana ny zava-mitranga, miaraka amin'ny endrika laconic izay ho lasa fofon'ilay akanjo. Io hatsaran-tarehy io dia mitovy amin'ny kapa Japone amin'ny Geta. Mariho ny fomba fijerin'izy ireo amin'ny akanjom-boninahitra goavam-be ao amin'ny taratasy misy ra sy ny pataloha 7/8. Mbola mihevitra ve ianao fa tsy mifanaraka amin'ny akanjo hariva ny firakotra hoditra amin'ny vehivavy?
Ankoatra ny loko fotsy malaza, ny mpamorona ny marika tanora dia nampiditra ny modely ho an'izao tontolo izao miaraka amin'ny bikan'ny lamba malemy. Ary ilay sehatra dia hamelatra ny silhouette amin'ny fomba fijery, hanampy azy hijery tsara sy mahafinaritra kokoa izany. Izany dia azo lazaina momba ny famoronana manintona an'i Mary Katrantzou, voaravaka amin'ny vato volafotsy sy ny loko manala loko, izay sarotra ny manongotra ny masonao.
Ahoana ny tsy fitenenana ny mozika amerikana Michael Kors, ny fanangonana vaovao rehetra izay miandry ny tsy faharetana? Tamin'ity indray mitoraka ity, ny tsipika lohataona amin'ny lohataona dia nampitomboina tamin'ny kiraro kiraro minimalista, izay natolotry ny mpanamboatra ny lamaody mody mitafy akanjo isan-andro, miaraka amin'ny akanjo ara-barotra, ary amin'ny kiraro mahazatra. Indrindra indrindra ny akanjo marevaka amin'ny akanjo volafotsy.
Ny akanjo toy ny shale dia fantatra amin'ny fampiharana azy. Noho izany dia niditra aho ary nihazakazaka tamin'ny raharahako. Milaza ireo mpanamboatra fa raha manampy singa tena tsara ianao dia tsy ho azo ampiharina fotsiny izy ireo, fa koa lamaody. Inona no azoko lazaina, fa ny mpamorona, toy ny hita tao anaty rano. Efa tamin'ity lohataona ity dia feno izao hatsaran-tarehy izao ny tontolo lamaody. Ilay amerikana mpanamboatra designer Alexander Wang dia nanitatra ny fanangonana ny marika miaraka amin'ny tapa-damba, izay manaloka ny kofehy miaraka amin'ny fitaovana volom-bolafotsy, lela vita amin'ny hoditra. Ankoatr'izany, ao amin'ny fanangonana an'i Alexander Wong dia afaka mahita ireo takelaka mainty mainty ianao .
Mieritreritra ve ianao fa ny kiraro kiraro azo atao amin'ny endrika minimalista? Jereo ny hatsaran'ilay marika malaza antsoina hoe Dolce & Gabbana. Ahoana no ahafahanao tsy ho tia ny Vietnamiana, voahodidina vato marobe sy manintona? Ary ny fomba mampitolagaga azy ireo amin'ny tara-masoandro! Namoaka modely maoderina i Versace, nantsoiny hoe "Medusa". Ireo rantsana mainty hoditra ireo dia asaina amin'ny akanjo roa, sy ny pataloha, ary amin'ny fikajiana ara-panatanjahantena.
Ny volom-behivavy tamin'ny alalan'ny rantsan-tànana dia nahazo ny Olympus lamaody. Ohatra, raha mpankafy zavatra amin'ny fomba britanika ianao, jereo akaiky ny lanjanao tsara tarehy sy ny lantom-piainan'i Londona avy amin'ny marika Jack Wills. Mampifandimbadika mofomamy mena sy tokotany amin'ny sodina isan-karazany ny fanao amin'ny fahavaratra. Fitaovam-pitaterana eo amin'ny fonon'ny cork, izay mifanaraka tanteraka amin'ny endrika amerikana sy Japone, dia nameno ny fanangonana vaovao amin'ny marika Superdry. Mila sandoka shale? Antso any Spring ny mahafantatra ny zavatra atolotra anao. Ireo kiraro manana fifandraisana mamirapiratra dia mampifandray ny làlana sy ny lampihazo eny an-dalambe.
Ilaina amin'ny fomba mahatalanjona iray ahitana ny fahatsorana, ny fahamendrehana ary ny fanatsarana? Ny New Look dia mahafantatra izay zavatra azonao atao mba hampifalifaliana lamaody. Ny kapa misy rongony eo anelanelan'ny rantsantanana dia azo atao, ary misy akanjo, akanjo marevaka , ary akanjo maivana. Ireo kiraro hatsarana toy izany dia azo jerena ao amin'ny fanangonana vaovao ny marika marika Oasis, izay vokatra isan-karazany dia fantatra amin'ny kalitaon'ny kalitaony sy ny hatsarany.
Ary ahoana ny itiavanao ireo sarina hoditra lamaody amin'ny ankamaroan'ny Asos? Ny famaranana amin'ny rivotra dia hanome fijery hehy, fanamarihana ny fikomiana sy ny fahafahana. Ny aloky ny aloky ny aloky ny aloky ny mazava dia mifanaraka tanteraka amin'ny sarin'ny loko rehetra. Ao Havaianas dia afaka mahita papelika volafotsy ianao ao amin'ny toeram-pivarotana. Raha lavo amin'ny lovantsofina voatanisa teo aloha ianao, voaravaka amin'ny vato, avy amin'i Dolce & Gabbana, dia misy tranokala mahaliana momba ny marika Fila.
Slate eo amin'ny sehatra
Ireo takelaka ho an'ny vehivavy eo amin'ny sehatra - kiraro fialantsiny amin'ity taona ity. Rehefa afaka 10 taona, dia resiny indray ny halavan'ny lamaody Olympus. Tsy afaka milaza ianao fa ny tovovavy tsirairay dia manapa-kevitra ny handeha mandritra ity andro ity amin'ny hatsaran-tarehy, saingy tena mahavariana izy. Raha zava-dehibe aminao, mihoatra lavitra noho ny style, sy ny fiononana sy ny fampiononana, dia manome safidy modely amin'ny sehatra kely. Raha te hijery ny silhouette amin'ny visa ianao, mamelatra ny tongotra, misafidy lasitra amin'ny sehatra goavana. Amin'ny fomba tsara indrindra, ireo flip-flops ireo dia mijery sarafana, akanjo midi-maivana, akanjo lantolahy "clell", A-silhouette, jeans kely, shorts.
Ny tapa-damon-damba eo amin'ny vatosoa dia hanampy amin'ny famoronana sary mahafinaritra isan'andro. Izy ireo dia tena tsara amin'ny fanehoana hatsaran-tarehy ambany izay maniry ny hitovy amin'ny modely amin'ny gazetiboky glossy. Raha tian'ny tarika monophony amin'ny loko klasika ianao, dia afaka miaraka miaraka amin'ny akanjo mafy, akanjo misy ny felatanan'ny lehilahy, blondy mamirapiratra. Raha mikasika ny firoboroboan'ny lamaody, eo amin'ny kiraro amin'ny kiraro avo ny kiraro. Ampifandraiso amin'ny rongony ao amin'ny gorodona, akanjo, pataloa fohy, sarafany fohy. Ny tifitifitra farany dia ho mendriky mendri-piderana amin'ity taona ity na hatory fahavaratra .
Ny mofomamin'ny tora-pasika ataon'ny vehivavy dia zavatra iray azonao resahina tsy an-kijanona. Noho ny famolavolany sy ny tokotany mahamiramirana no nahatonga azy ireo ho toy ny akanjo tsara indrindra ho an'ny sary an-dalambe. Izy ireo dia asiana olo-malaza, ary ireo hatsaran-tarehy rehetra izay manandrana fomba maotina, nefa azo ampiharina. Ny karazana plastika malaza dia fitetezana, ireo izay mijanona amin'ny tongotra noho ny fefy manodidina ny ankihibe.
Matetika ny kirarony dia voaravaka floral, kesika. Ny modely amin'ny maotina marevaka dia mahaliana. Raha mikasika ny fitaovana, raha mandeha any an-dranomasina ianao, dia asio felana fingotra, izay tsy afaka manimba ny rano sira. Raha manapa-kevitra ny handeha eny amoron-dranomasina ianao, dia mifidiana kiraro amin'ny takela-by. Ao anatin'izany no hahatsapanao fiononana kokoa noho ny amin'ny fandevenana tsotra.
Firafitry ny vehivavy ho an'ny dobo
Ny mason'ny fanatanjahan-tena ataon'ny vehivavy dia manatrika ny fanangonana marika fanatanjahan-tena malaza (Adidas, Nike, Puma ary ny hafa). Momba azy ireo amin'ny antsipiriany bebe kokoa dia hiresaka eo ambany. Rehefa misafidy gadona ho an'ny dobo, dia tadidio fa tokony ho maivana, elastika izy ireo ary miaraka amin'ny tokotany tsy misy loko. Mba hanaovana izany, misafidiana kiraro amin'ny hodi-biby madinika, voamarikao izay afaka miarina hijanona amin'ny tany mahatsiravina. Tandremo ny elasticité ny tokana. Tokony ho mavesatra izany. Raha tsy izany, rehefa mandeha ianao dia hijaly ny fivavanao.
Vehivavy matevina afangaro
Ny felam-behivavy 2018 - fingotra amin'ny loko mainty sy fotsy malaza, voaravaka volom-boasary marevaka, tsipika mahazendana, sary amam-pihetseham-po miaraka amin'ny lolo, vato manjelanjelatra, paillettes, misy loko be. Mba hamoronana sary ao amin'ny fomba fanoratana, dia niasa ho an'ny voninahitra ireo mpanakanto ary namoaka loko marevaka misy metaly, miaraka amin'ny banga mainty. Ho an'ireo izay midera zavatra mahavariana miaraka amin'ny marika an-jazakely sy ny fitiavany, ireo marika ambony dia nampitombo ny fanangonana azy ireo tamin'ny flip-flops tao anaty tonony mavokely miaraka amin'ny voninkazo floral, ny lokon'ny volamena mavokely amin'ny vato.
Ny sarin'ny vehivavy "Adidas"
Ny lamba fotsy hoditra adidas miaraka amin'ny mainty no tena be mpitia indrindra amin'ny vehivavy lamaody izay mankafy kiraro an'ity marika ity. Inona no azoko lazaina, fa ity marika fanatanjahantena ity kosa dia nanaporofo fa mpamokatra tsy mahazatra, afa-tsy vokatra tsara. Ohatra, ny fehin-kibo Eezay Soft dia manana bodofotsy matevina avy amin'ny EVA. Izy ireo dia maivana, mahazatra ary manamboatra manokana ho an'ny tora-pasika. Ary Black Flaps Beachcloud Cloudfoam dia manana silhouette mahazatra. Ny endrik'izy ireo dia laminasa misy lamina telo dimampolo. Ankoatra izany, ity modely ity dia manana rakotra Cloudfoam haingana maina.
Ny Slate Women Nike
Ny takelaka ho an'ny vehivavy Nike - kiraro noforonin'ny teknolojia farany. Ohatra, ny endriky ny moron-dranomasina dia manana endrika manokana izay manohana ny tongotra. Midika izany fa rehefa avy nandany ny tongotra manontolo andro ianao, dia tsy ho reraka sy henjana. Ho an'ity fisainana goavana ity dia endrika manintona izay mameno tsara ny sary noforonina. Mandritra ny fividianana, diniho tsara ny entana, mba tsy hikorontanana. Eto dia ilaina ny mandinika ny kalitaon'ny sombin-javatra (tsy misy lanezy, tranainy hita amin'ny lakaoly), fitaovana (loko vita amin'ny synthetic, tsy ampy loko).
Ny vehivavy dia maneso "Reebok"
Ny lamaody vehivavy lamaody any Reebok - fahazavana, fampiononana ary famolavolana maoderina, izay ny rehetra dia adala amin'ny te-handeha iray dingana amin'ny lamaody amin'ny lamaody. Mankao fialantsasatra mafana ve ianao? Dia avy eo ny trend Shale Cash moka no noforonina indrindra ho anao. Eto ianao ary ny fatiantoka tsy azo avela amin'ny alàlan'ny foza EVA, ary ny endriky ny ambiny, natao mifanaraka amin'ny endriky ny tongotra. Ary ny fisalobon 'i Reebok Barbados dia mahazo ny fanohanana ny andohalin-tongotra sy ny tokantrano mahamiramirana . Ary ny loko marevaka amin'ny modely "Reebok" dia hanampy amin'ny fisafidianana kiraro ho an'ny akanjo amin'ny fahavaratra.
Slacs ho an'ny vehivavy
Ny sarin'ny vehivavy Crocs - izany no mahatonga ny fashionista rehetra ho adala. Tsy nividy "Crocs" miloko marobe ve ianao? Ny fonon'ity kiraro ity dia vita amin'ny fitaovana Lite Ride, izay lasa midika hoe teny hoe "fampiononana". Ankoatr'izany, ny sarin'ireo marika dia malaza noho ny lanjany kely, ka noho izany dia tsy mahatsiaro azy ireo ianao mandritra ny andro. Ny flip-flops dia tsara ho an'ny hilomano ao anaty dobo filomanosana, mba hialana sasatra eny amoron-dranomasina, ary hikoriana amin'ny fahavaratra mandritra ny fahavaratra. Mahafinaritra azy ireo ny mitafy ary tsy dia mendri-piderana loatra. Izany no mahatonga ny "Crocs" ankalalahana manerana izao tontolo izao.
Vehivavy Slide Rider
Ny silikônin'ny vehivavy dia mamoaka "Ryder" - teti-bola malaza amin'ny kitapom-bolo amin'ny lohataona, izay ahafahanao mahazo aina, mody ary mahafinaritra. Ny marika Breziliana dia nanamboatra ny fanangonana vaovao miaraka amin'ny andiam-boloky ny lohataona: Ny Island (tady maromaro sy ny endriny vita amin'ny printy bibilava), R1 Energy (sehatra tropikaly manjelatra), Cape (shale mitana saribakoly mamirapiratra mamirapiratra), R1 ).
Ny Slate Women "Puma"
Ny satroka vehivavy Puma dia mendri-piderana, maoderina ary mahavariana. Tsy azo atao ny manongotra ny mason'ny loko marevaka, avy amin'ny tsikombakomba mainty sy fotsy. Ny fehikibo malefaka dia tsy manasitrana ny tongotra, ary ny tokana, noforonina avy amin'ireo teknolojia paty farany, manohana ny tongotra, manome fahatsapana tsy fahampiana sy fahazavana. Izany no karazana kiraro izay tsy azo atao ao anaty dobo filomanosana, akaikin'ny ranomasina, fa koa miaraka amin'ny akanjo isanandro.
Ny vehivavy "Slave" kelin'i Kelvin Klein dia tia vehivavy tanora an-tapitrisany tahaka ny akanjo, fofom-biriky an'ity marika manan-danja ity. Ny tantsambo dia ankafizin'ny olona maro noho ny endrik'izy ireo minimalistika sy ny loko mifehezana. Ity hatsaran-tarehy ity ary te hanao akanjo tora-pasika, akanjo isan'andro. Tsy mahatsapa amin'ny tongotra ny fialana amin'ny lamaody noho ny jiro fingotra avo lenta sy ny lamosina.
Ankapobeny ho an'ny lohataona
Kely ambony ambonin'ny lohalin'i Salta
T-shirts ho an'ny antoko bachelorette
Hevitra ho an'ny sarintany Indiana
Ahoana no ahafahan'ny ankizy mandray an'i Arbidol?
Andriamanitra divay ary mahafinaritra
Vehivavy Summer Summer Shoes 2014
Ahoana no hanamboarana turkey amin'ny oven?
Ahoana ny fomba fanaovana haingon-tsoavaly tsy misy fanangonana metaly sy mpikisika?
Vokatry ny henan'akoho nanako tao anaty lafaoro
Bilaogin'ny fanomezana ho an'ny taona fifandraisana